टुप्पी कसेर पढ्ने बाहुन सीडीओ भयो भनेर नपढ्नेले रीस गरेर हुन्छ ? <br> प्राध्यापक डा. जगमान गुरुङ
Homebichar bislesanटुप्पी कसेर पढ्ने बाहुन सीडीओ भयो भनेर नपढ्नेले रीस गरेर हुन्छ ?
aparadhkhabar.com 3:52 PM
इतिहास र संस्कृतिका धुरन्धर विद्वान प्राध्यापक डा. जगमान गुरुङ यस्ता ब्यक्ति हुन् जसलाई संस्कृत भाषाका बेदका ऋचादेखि अंग्रेजी विषयमा पश्चिमा समाजशास्त्रका हरफ कण्ठै छ । पछिल्लो समय नेपालमा जातीय क्षेत्रीय विभेद रहेको दावी गर्दै चलाइएका ‘आन्दोलन’प्रति कठोर तथ्यगत विमति राख्ने जनजाति समुदायकै यी विद्वान नेपालमा परापूर्वकाल देखि विभिन्न जातिहरु समन्वयात्मक संस्कृतिमा मिलेर बसेको वताउँछन् । जातीय विभेद रहेको भनी पछिल्लो पटक चलाइएका अभियानहरुलाई उनी पश्चिमाहरुको लगानीमा नेपाली संस्कृति भत्काउने प्रयास भन्छन् ।
कसले भन्यो त्यो ? यदि कसैले त्यस्तो भन्छ भने त्यसले नेपाली समाज पढेकै छैन । नेपाली समाज त यस्तो समाज हो जहाँ केही ठाउँमा बाहेक सबैतिर सै जातजाति मिसिएको साझा बसोबास छ । कुनै ठाउँमा एकल जातीय बसोवास नै छ भने पनि त्यहाँ अन्य जातिका मान्छेलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने सामाजिक परम्परा यहाँ छ । । कुनै ठाउँमा खस समुदाय छ भने त्यहाँ गुरुङलामालाई पनि पुज्ने गरिन्थ्यो । यसको एउटा उदाहरण छ– पूर्वमध्य कालमा अहिलेको सिंजा उपत्यका भएको ठाँउ जहाँ सवा लाख जनसंख्या भएको खस देश थियो । ग्रन्थहरुमा लेखिएकै छ– सपाद लक्ष खस देश । त्यो भन्या सवा लाख जनसंख्या भएको खस देश भनेको हो ।
यसको अर्थ राज्यले थिचेको पनि छैन मिचेको पनि छैन । जहाँ जहाँ सम्मान दिनु पर्ने हो त्यो गरेको छ । म त भन्छु अहिले मात्र हैन हिजैदेखि राज्यले जातजातिलाई उच्च सम्मान गरेको छ । अहिले यस्तो जातको कुरा उठ्नु धेरै नै दुःखद् छ । यसरी हुन्न अब हामीले राष्ट्रलाई के दिंदै छांै सोच्ने बेला आयो । चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः